Ọdụ ụgbọ elu Barajas dị na Madrid na-akwadebe maka ọdịda mberede | Akụkọ akụrụngwa
[EDITIERE 19:09 PM] Finalmente ụgbọ elu ahụ rutere n'ụzọ zuru oke n'ọdụ ụgbọ elu ma ugbu a, a ga-enyocha ihe kpatara ọdịda mberede a. Onye ọ bụla chọrọ, na-ekele ndị ọrụ niile maka nhazi na nhazi na ọdụ ụgbọ elu n'onwe ya na ndị ọrụ mberede.
Nke a abụghị ụbọchị kachasị mma ọdụ ụgbọ elu Barajas na Madrid. N'ehihie, ma ọ bụ ụtụtụ, malitere site na nsogbu nke ụgbọ elu nke otu ma ọ bụ karịa drones dị nso ọdụ ụgbọ elu ahụ, yabụ ndị na-achịkwa mechara kpebie igbochi ndị na-ewepụ na mbata ruo mgbe ọnọdụ ahụ dị.
Mana nke kachasị njọ ka ga-abịa na ọ bụ n'oge na-adịghị anya mgbe ihe malitere ịme ka nsogbu ọzọ pụta ìhè ma na nke a ihe dị njọ karịa n'echiche anyị. Planegbọ elu nke chọrọ Canada, wepụrụ na ọdụ ụgbọ elu na-agbasa akụkụ nke ihe ndozi, yabụ kagburu ụgbọ elu ahụ ozugbo ọ nọ n'ikuku, naanị ihe a ga-eme bụ ịlaghachi na Madrid, yabụ a na-akwado ọdịda mberede ugbu a.
Na nchịkọta, a kwụsịrị ụgbọ elu ahụ ma ụgbọ elu ahụ na-efe n'isi obodo ahụ na ala dị ala, na-ere mmanụ ọkụ nke ọ kwadebere maka njem ahụ na ịdị elu dị ala, yabụ ọtụtụ ndị ọrụ na-tweeting nke a ma ejiri netwọkụ mmekọrịta na-ekiri vidiyo nke ụgbọ elu ahụ na-efe efe na ngụkọta nke mmadụ 130 n'ime ndị dị njikere ịme njem mberede a nke anyị na-enwe olileanya na ịchọrọ na-aga n'ụzọ zuru oke.
N'oge a, ka anyị na-ede akụkọ a, kọmitii nwere nsogbu na-ezukọ na ọdụ ụgbọ elu Madrid-Barajas, na-echere nkwụsị mberede nke ụgbọ elu Air Canada ACA837.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ụgbọ elu ndị ọzọ na ọrụ na ọdụ ụgbọ elu na-aga n'ihu na-adịkarị n'agbanyeghị nsogbu ndị drone kwuru na ụfọdụ igbu oge. Tumadi ihe a na-akwadebe bụ ihe niile dị mkpa iji nyere aka, nyere aka ma kpuchido ọdịda a site na Boeing 7367, ya mere otu 6 nke ndị ọkụ ọkụ si na Community na-etinye na Barajas, akụ 10 SUMMA na ụlọ ntu mberede Red Cross.
? Adolfo Suárez Airportgbọ elu #Madrid-#Barges, dọrọ aka ná ntị ịnata ụgbọ elu AK837 site na @AirCanada ebe Toronto.
Ọdụ ụgbọ elu ahụ na-arụ ọrụ. https://t.co/L0g4RuMUfn
- Aena (@igbo_igbo) February 3, 2020
La oge a na-eche anya dị ihe dịka elekere asaa na ọkara nke abalị taa. Otu onye agha F-18 na-efe efe n'akụkụ ụgbọ elu ahụ iji chọpụta mbibi ụgbọelu ahụ nwere ike ịdị. N'akụkụ gị Javier Martin Chico, ọnụ na-ekwuru maka ngalaba ọrụaka nke ndị ọrụ ụgbọ elu SEPLA, kwuru n'oge gara aga na RTVE:
Buru n'uche na ha na-etinye oge ma ọ bụ obere oge, ọ dị mma. Ọ bụ ihe ha na-achịkwa na ihe ha na-achọ bụ ịnwe oke ibu maka ikike ọdịda dị mma na Madrid.
Ọ bụrụ na ịchọrọ soro uzo nke ugbo elu a ị nwere ike ime ya na weebụsaịtị a. Anyị na-atụ anya na ihe niile gwụchara otu akụkọ ọzọ banyere ọdụ ụgbọ elu. Anyị na-ahapụ ụda nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-agwa ndị njem banyere nsogbu ahụ na-arịọ maka udo nke uche:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ọdụ ụgbọ elu Barajas dị na Madrid na-akwadebe maka ọdịda mberede
Huawei FreeBuds 3, anyị nyochaa mbipụta ọhụrụ na uhie